नियमित शारी’रिक स’म्बन्धले हृदयघा’तका कारण मृ’त्यु हुने स’म्भावना न्यून – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. नियमित शारी’रिक स’म्बन्धले हृदयघा’तका कारण मृ’त्यु हुने स’म्भावना न्यून – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
नियमित शारी’रिक स’म्बन्धले हृदयघा’तका कारण मृ’त्यु हुने स’म्भावना न्यून
बुढ्यौली र दीर्घायु हुनु कसैको बसमा हुँदैन । विज्ञानका अनुसार पढाई, व्यायाम गर्नु र स्वस्थकर खाना खानु नै एक स्वस्थ जीवनका लागि आवश्यक चीज हुन् । तर, पछिल्लो समय अनुसन्धानकर्ताका अनुसार शारी’रिक स’म्बन्ध पनि अत्यन्त आवश्यक छ ।
अनुसन्धानकर्ताका अनुसार शारी’रिक स’म्बन्धले थुप्रै ग’म्भीर बिरामीहरुको ख’तराबाट बचाउँछ । शारी’रिक स’म्बन्धले सन्तुष्टि मात्र दिँदैन यसले दिमागी रुपमा पनि तन्दुरुस्त राख्छ । यसले रो’ग प्रति’रोधी क्षमता बढाउँछ । उच्च रक्तचापलाई सन्तुलनमा राख्न र मुटुसम्बन्धी थुप्रै सम’स्याहरुबाट बच्नुका साथै लामो उमेरका लागि पनि शारी’रिक सम्ब’न्ध राख्नु जरुरी छ ।
न्यू इंग्लयाण्ड रिसर्च इन्स्टिच्युटका अनुसन्धानकर्ताका अनुसार शारी’रिक स’म्बन्ध र मुटुका रोगहरुसँग सम्बन्धित एक अनुसन्धान गरिएको थियो । जसमा ६५ वर्षभन्दा कम उमेरका १ हजार १ सय २० जना पुरुष र महिलाहरु सहभागी थिए । यस अनुसन्धानका अनुसार २२ वर्षपछि आएको नतिजाका अनुसार हरेक दिन शारीरिक सम्बन्ध राखेमा मुटुसम्बन्धी रोग लाग्दैन ।
अनुसन्धानका अनुसार ‘से’क्स लाइफ’ सक्रिय हुनेहरुको हृदयघा’तपछि पनि मृ’त्यु हुने सम्भावना कम हुन्छ । जसले एक हप्तामा एकभन्दा बढी पटक से’क्स गर्छ त्यस्ता व्यक्तिको हृदयघा’तबाट मृ’त्यु हुने सम्भावना २७ प्रतिशत कम हुन्छ । यद्यपि, से’क्स नगर्नेहरुको मृ’त्यु हुने सम्भावना ८ प्रतिशत मात्रै कम हुन्छ ।
यसमा शारी’रिक स’म्बन्ध राख्दा पार्टनरको लगावमा पनि भर पर्ने अनुसन्धानमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, हप्तामा एक पटक से’क्स गर्नेको उमेर ३७ प्रतिशत लामो हुन्छ । अमेरिकी जर्नल अफ कार्डियोलोजीमा छापिएको एक अध्ययनका अनुसार से’क्सले उमेर लम्ब्याउँछ । उक्त अध्ययनका अनुसार से’क्स कम गर्ने पुरुषमा मुटुको रोग लाग्ने ख’तराका साथै इरेक्टाइल डिस’फंक्शनको स’मस्या पनि बढाउँछ । साथै, यौ’न क्रियाकलापमा सक्रिय हुने पुरुषमा शारीरिक सक्रियता बढाउने क्षमता धेरै हुन्छ । एजेन्सी
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको March 14, 2021 March 14, 2021 201 Viewed